Ny antony 5 lehibe dia mitaky tolona hametrahana ny ROI ara-tsosialy | Martech Zone
Zoma, Jona 29, 2018 Douglas Karr
Nizara infographic tsy mampino izahay izay manome tsipiriany momba ny fomba ahafahan'ny orinasa iray refesina ny tamberim-bidy sosialy momba ny fampiasam-bola. Ny fandrefesana ny ROI amin'ny media sosialy dia tsy hoe tsy misy olana. Raha ny marina, ny tsy fahampian'ny fahaizana mandrefy ny fiantraikan'ny media sosialy - indrisy - dia nanjary orinasa maro nandao tanteraka ny media sosialy.
Mahomby ve ny varotrao amin'ny haino aman-jery sosialy?
Ny fandrefesana ny fiverenan'ny fampiasam-bola (ROI) ho an'ny ezaky ny haino aman-jery sosialy dia lohahevitra niadian-kevitra tamin'ny mpivarotra. Orinasa marobe noho ny hatramin'izay no manokana loharanom-pahalalana bebe kokoa amin'ny marketing ara-tsosialy, saingy mbola maro no tsy afaka mamaritra raha mahomby ireo ezaka ireo. Ireto ny sasany amin'ireo fironana ambony sy fanamby atrehin'ny marika amin'ny fandrefesana ny ROI sosialy. tamin'ny alalan'ny MDG
Ireo antony 5 lehibe mitaky tolona mba hamantarana ny ROI ara-tsosialy:
Tsy afaka mifamatotra amin'ny media sosialy amin'ny valin'ny asa aman-draharaha izy ireo - Na eo aza ny fanarahana ny metrika fampiroboroboana, tsy hitan'ny marika ny fomba fiantraikan'ny lahatsoratra ara-tsosialy sy ny fizarana amin'ny fidiram-bola ankapobeny.
Tsy manana fahaizana manokana sy loharanom-pahalalana izy ireo - Mpivarotra maro no vaovao amin'ny haino aman-jery sosialy sy fitaovana fanaovana fanadihadiana. Mety misy fiolahana mianatra rehefa mizatra amin'ny sehatra vaovao ny mpivarotra ary manomboka mizara loharano amin'ny fandrefesana ny ROI sosialy.
Mampiasa fitaovana sy sehatra fandrefesana tsy ampy izy ireo - Na dia maro aza ny fitaovana fanaraha-maso media sosialy misy ankehitriny, tsy ny sehatra rehetra no hanome ny angon-drakitra ilaina amin'ny mpivarotra.
Mampiasa fomba famakafaka tsy mifanaraka izy ireo - Ny mpivarotra sasany dia tsy afaka mahazo sary mazava momba ny fahombiazan'ny lahatsorany noho ny tatitra tsy mifanaraka.
Miankina amin'ny angon-drakitra mahantra na tsy azo ianteherana izy ireo -Ny kalitaon'ny angon-drakitra ara-tsosialy voaray dia zava-dehibe ihany koa. Ohatra, ny sehatra media sosialy dia feno kaonty sandoka sy dika mitovy. Indraindray ny hetsika avy amin'ireo kaonty ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny angon-drakitrao.
Na dia somary manondro ny teknolojia aza ity dia miady hevitra aho fa angamba maro ny mpivarotra no tsy mampiasa media sosialy izay tena ilana azy. Ohatra, fikarohana momba ny fametrahana ny vokatra sy ny marketing. Azonao atao ny mikaroka sy mahita fampahalalana marobe momba ny mpanjifanao tsara indrindra, ny mpihaino kendrenao, ny jeografia kendrena, ny antony manosika azy ireo, ny fitarainany, ny olany ary maro hafa. Amin'ny fampiasana an'io data io, azonao atao ny manatsara ny paikadinao sy ny fanolorana ny vokatrao hanavahana tsara kokoa ny tenanao sy ny fivarotanao ny tenanao. Ahoana no hamaritana izany? Tena sarotra ny manoritra ny tsipika tototry, saingy fantatray fa mendrika izany.
Ohatra iray hafa, tsy dia malaza loatra. Ny mpanjifa dia manana olana amin'ny vokatrao na serivisinao ary mizara ny fahasosorany amin'ny alàlan'ny media sosialy. Ity dia manome dinika ho an'ny daholobe hanehoana ny fomba anohananao ny mpanjifanao. Ny orinasa sasany aza manao laharam-pahamehana amin'ny olana mifototra amin'ny fitaoman'ny mpanjifa… saingy nijery izahay fa misy olona manan-kery kokoa mandray sy manamafy ny olana. Ankehitriny dia mijery izany ny mpanjifa sorena, ny influencer, ary ny mpankafy sy ny mpanaraka azy rehetra.
Miankina amin'ny hamelezana homerun anao na ny fitokonanao, inona no vokany tsy tambo isaina amin'ny orinasao? Tena sarotra lazaina izany. Araka ny nambaran'ny MDG Advertising tamin'ny famoahana ny sary farany nataony, ny ROI an'ny haino aman-jery sosialy:
Mitaky fotoana sy ezaka ny fahitana ny fomba mety, fa ny fahalalana ny fomba hanarahana ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny farany ambany dia hahatonga ny fampiasam-bola mendrika.
Ity ny infographic feno izay mampiseho ny fahasarotan'ireo orinasa, izay azon'izy ireo refesina, izay ahitan'ny mpivarotra tombony ary ireo olana atrehiny.